wararka maanta-arlaadii.net » Meydka Nin Aan la Aqoonsan Oo Laga helay Magalada Muqdisho
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Degmada Heliwaa ee Gobolka Banaadir, meydka nin la garan waayay oo jirkiisa ay rasaas ka muuqato ayaa saakay lagu arkay xaafada Cali Turcaaye ee degmadaasi, gaar ahaan aagga Masjidka Qaliil
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta qaar u xaqiijiyay nin Da’diisa in lagu qiyaasay 30 sano, saakay markii hurdada laga soo tooseyna lagu arkay xaafada Cali Turcaaye, iyada oo illaa hadda aad ay u hadal hayaan dadka deegaanka.
Waxaa la sheegay qaybaha sare ee jirkiisa ninkan inay rasaas kaga tiilay, lamana oga cida ku dhufatay xabadaha uu u dhintay ruuxaasi, oo dadka deegaanka ay garan waayeen.
“Meydka nin ayaan saakay ku araknay xaafadeena Cali Turcaaye, Da’diisa waxaa lagu qiyaasay 30 sano, arrintan waan la yaabnay, ninka jirkiisa waxaa ku tiilay dhawr xabadood, waana garan weynay, intaas kadib maamulka degmada ayaan ku wargelinay, dhawaan xaafadeena arrintan oo kale kama dhicin.” Ayuu yiri qof ka mid ah dadka degaanka.
Masuuliyiinta maamulka degmada Heliwaa iyo laamaha ammaanka oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in arrintan ay jirto, xalayna ay dhacday, balse hada ay wadaan baaritaanada falkan la xiriira, dibna ka soo sheegi doonaan wixii ka soo baxa baaritaanada socda.
Dhacdooyinka nuucaan oo kale ah ayaa horey uga dhacay magaalada Muqdisho, waxaana arrintan inta badan sabab u ah amni darada mararka qaar ka jirta magaalada.
Nin Bajajle ah oo Lagu Dilay Magalada Muqdisho